ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ဆင်းရဲမွဲတေမှု၊ လမ်းဘေးဈေးသည်နှင့် ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား (ရုပ်သံ)
ဆင်းရဲမွဲတေမှု၊ လမ်းဘေးဈေးသည်နှင့် ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား (ရုပ်သံ)
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 6:18 PM
ရန်ကုန်မှာ ဗိုလ်မြင်.ဆွေ ကလမ်းဘေးဈေးသည် တွေ
ကို အပြင်းအထန် နှိမ်နင်းတယ် ။ မနက်စောစော ဆို စည်ပင် ၀န်ထမ်းတွေ(အရာရှိကအစ) ရာနဲ.ချီတဲ. ၀န်ထမ်းတွေ လမ်းဘေးဈေးသည်
တွေ ကိုလိုက်ဖမ်းရတယ် ၊
မြို.က အတိုင်းအတာတခု အထိ သန်.ရှင်းသပ်ရပ် ပြီး
နိုင်ငံတော်ကလည်း အောက်ခြေလူတန်းစားတွေ အသင်.အတင်. အဆင်ပြေအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ. တနေ. လမ်းဘေးဈေးသည်တွေ ရှင်းလင်းရင် ထားပါတော.။
.. အခုဟာက ရန်ကုန်မှာ ငှက်ပျောသီးစားပြီး အခွံပစ် စရာ
အမှိုက်ပုံးတောင် မထားနိုင် ၊
ပန်းဆိုးတန်း ၊ ဘားလမ်း စတဲ. မြို.လယ်လမ်း ပလက်ဖေါင်းတွေတောင် ကျောက်ပြားတွေကွဲ လို.
လမ်းလျှောက်မရလို. ကားလမ်းပေါ်တက်လျှောက်ရနဲ. ၊
လိုက်ဖမ်းလို.ဘာလုပ်မှာတုန်း ။ ။ ။